प्रचण्ड, विष्णु पौडेल र बादललाई भनेको छु- यो त अति भयो ! - होमपेज
प्रचण्ड, विष्णु पौडेल र बादललाई भनेको छु- यो त अति भयो !
उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका मन्त्री वर्षमान पुनलाई भेट्न सिंहदरबारस्थित उनको कार्यकक्षमा पुग्दा पार्टी अफिसमा जस्तै नेकपाका नेताहरुको भीडभाड थियो । एकातिर उर्जासचिव, अर्कातिर एमालेका पूर्वसचिव मन्त्री पुनलाई भेट्दै थिए ।
पूर्वमाओवादी नेतासमेत रहेका मन्त्री पुनसँग हामी दुईवटा विषयमा अन्तरवार्ता गर्न साँझ परेपछि सिंहदरबार छिरेका थियौंः एउटा- नेकपाको संकटबारे, अर्को- समग्र सरकार र उनले चलाइरहेको मन्त्रालयबारे ।
उर्जामन्त्री बनेपछि गुमनामजस्तै चर्चा बाहिर पर्न थालेका मन्त्री पुनले आफू लो प्रोफाइलमा काम गर्ने व्यक्ति भएको अनलाइनखबरलाई बताए । उनले भने-‘मैले अर्थमन्त्रालयमा बस्दा पनि धेरै हल्ला गरेर हिँडेको छैन । म अर्थमन्त्री हुँदा गुरिल्ला अर्थमन्त्री भने धेरैले । तर, पछिचाहिँ अर्थशास्त्रको त्यति धेरै पृष्ठभूमि नभए पनि राम्रै चलाएँ ।’
अनलाइनखबरसँग कुराकानीका क्रममा मन्त्री पुनले सरकारको कामलाई क्रिकेट म्याचसँग सामान्यीकरण गरे । तर, यो सरकारी म्याच ट्वान्टी ट्वान्टी क्रिकेटजस्तो नभएको बताउँदै उनले सुरुमै चौका वा छक्का हान्न खोज्दा आउट हुन सकिने बताए । उनले भने- क्रिकेट खेल हेर्नेलाई ट्वान्टी ट्वान्टी राम्रो । फटाफट आयो, चौका, छक्का हान्यो । तर, क्वालिटीको खेलाडी छुट्याउने चाहिँ सिरिज खेलमा हो ।’
हामीले मन्त्री पुनसँगको कुराकानी उनको मन्त्रालयभित्र देखिएको नेकपाका नेताहरुको भीडबाटै सुरु गर्‍यौं, जुन भीडमा योगेश भट्टराई, प्रभु साहदेखि सत्यनारायण मण्डलसम्म भेटिएका थिए ।
उर्जा मन्त्रालयमा तपाईलाई भेट्न आउने नेकपा नेताको निकै घुइँचो देखियो । मन्त्री भएर पनि पार्टीकै काममा पो बढी खटिरहनुभएको छ कि क्या हो ?
पार्टी एकतापछि नेता, कार्यकर्ता र जनताले तीव्र गतिमा संगठनात्मक एकता होस् भन्ने चाहेका थिए । तर, त्यो अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । एकता छिटो टुंग्याउन नेतृत्वलाई मैले कुरा राखिदेओस् भन्ने पार्टीका नेता कार्यकर्ताको चाहना छ । त्यही चाहना बोकेर नेताकार्यकर्ता मकहाँ (मन्त्रालयमा) आउनुहुन्छ ।
संगठनात्मक एकताबारे महासचिव विष्णु पौडेल र कार्यदलमा रहनु भएकाले रामबहादुर थापा बादलजीलाई पनि भेटेरै भनेको छु- यो त अति भयो ।
नेता कार्यकर्ताका गुनासो तपाईले पार्टी अध्यक्षसम्म पुर्‍याउनुहुन्छ कि आफैंसँग राख्नुहुन्छ ?
मैले संगठनात्मक एकता अन्योलमा पर्दा नेतृत्व कमजोर हुँदै गएको जानकारी गराउने गरेको छु । प्रधानमन्त्री बिरामी पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई मन्त्रीका हैसियतमा सुझाव दिएको छु ।
खास गरी प्रचण्ड कमरेडलाई पार्टी अध्यक्षको हिसाबले पार्टीका नेता-कार्यकर्ताको चासोबारे जानकारी गराएको छु । संगठनात्मक एकताबारे महासचिव विष्णु पौडेल र कार्यदलमा रहनु भएकाले रामबहादुर थापा बादलजीलाई पनि भेटेरै भनेको छु- यो त अति भयो ।
झापा आन्दोलनपश्चात वर्षौं छिन्नभिन्न भएको आन्दोलनकारी शक्तिलाई एक ठाउँमा ल्याउनु उपलब्धि हो । जनताले यसलाई अनुमोदन गरेर मत पनि दिएका छन् । अहिले साना-साना समस्याले नेतृत्व क्षमतामा प्रश्न उठेकाले सकिने जति निर्णय गरेर पठाऔं र बाँकी कुरालाई म्यानेज गरेर जाऊँ भनेर नेतृत्वलाई सुझाउँदै आएको छु ।
पार्टीको संकट हल गर्ने तपाईसँग कुनै सूत्र पनि छ कि ?
अहिले त प्रधानमन्त्री उपचाररत हुनुहुन्छ । हामी सबै उहाँको स्वास्थ्यलाभको कामना गरिरहेका छौं । उहाँ स्वस्थ हुनेबित्तिकै सोझै यसअघि स्थगित स्थायी कमिटी बैठक बोलाएर संगठनात्मक अन्योलताबारे ठोस निर्णय गर्नुपर्छ, कार्यविभाजन गर्न अब बियाँलो गर्न हुँदैन ।
अहिले केन्द्रीय सदस्य जति छौं, सबैलाई प्रदेश र अरु विशेष स्थानमा खटाइदिनुहोस् । प्रदेशले केन्द्रीय सदस्यलाई जिम्मा दिनुहुन्छ । प्रदेशले जिल्लामा र जिल्लाले नगर, गाउँमा कार्य विभाजन गर्छ । यो सामान्य कुरालाई एक्लाएक्लै गरेर जटिल नबनाउँ ।
हिजो एमाले र माओवादीभित्र आफ्नै मनोविज्ञान थिए होला, तर अब त्यसबाट माथि उठेर नयाँ बहसको थालनी गर्नुपर्ने बेला आएको छ । नयाँ संगठनात्मक र वैचारिक बहस गर्ने बेला आएको छ । नयाँ कार्यशैली र समाजवादबारे बहस गर्न समयले माग गर्दैछ । कार्यदिशामा बहस गरेर त्यसको आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरण र समृद्धिमा बहस गरौं । हिजो को-कहाँ थियौं भनेर हिसाब किताब नगरौं ।
प्रदेशले जिल्लामा कार्यविभाजन गर्छ । कसका कतिजना मान्छे परे भन्नेतर्फ नसोची मोटामोटी कार्यविभाजन गर्नेतर्फ सोच्नु नै पार्टी र जनताको हितमा छ । कसका कतिजना परे भन्ने हिसाब गरेर कहीँ पनि पुगिँदैन । सबैलाई एकीकृत गरेर समृद्धिको यात्रामा अघि बढौं ।
स्थायी कमिटीका नेताहरुले प्रदेशमा इञ्चार्जसीप लिनुभएको छ । स्थायी कमिटी बसेर सात प्रदेश प्लस विशेष जिम्मा लिएका नेतालाई परिचालन गर्नेछ । सरकारमा जानेलाई प्रधानमन्त्रीले नै लिड गरिरहनुभएकै छ । प्रदेशमा जानेलाई प्रदेश इञ्चार्ज र अरु विशेषकालाई त्यहीअनुसार नेतृत्व हुन्छ । यो साधारण कुरा हो ।
पार्टीभित्र समस्याचाहिँ कहाँनेर परिरहेको हो ?
यसअघि प्रदेशको सानो टिम जसरी बनाइयो, त्यसको सबैले प्रशंसा गरेका थिए । अलिकति गति दिएपछि फेरि पुरानै गतिरोध देखापरेको छ । त्यसैले स्थायी कमिटी बैठक बसेर उठेका विषयहरुमा छलफल तथा बहस गर्दै कार्यविभाजन गर्नुपर्छ । यसपछि सरकार र पार्टीले समेत गति लिनेछ ।
किनभने, यतिबेला नेता-कार्यकर्ता परिचालन भएकै छैनन् । जब नेता-कार्यकर्ता परिचालन हुन्छन्, तब त्यसले सरकार र पार्टीका काम-कारबाही जनतासम्म पुर्‍याउन मद्दत गर्छ । यति मात्रै होइन, यसले जनतामा उठेका विभिन्न जिज्ञासा र विचारहरु नेतृत्वसम्म ल्याई ‘टु वे कम्युनिकेसन’ को अहिलेको अभावलाई पनि दूर गरिदिनेछ ।
अहिले सरकार र जनताबीच ‘कम्युनिकेशन ग्याप’ छ । पार्टी र सरकार, पार्टी र जनताबीचको दूरी पनि उस्तै छ । सरकार एक्लोजस्तो र पार्टी निस्क्रिय भएजस्तो अनुभूति भइरहेको छ । त्यसैले संगठनात्मक एकता टुंग्याइयो भने यसले पार्टी र सरकार दुवैलाई गति दिन बल पुर्‍याउँछ ।
अब अलिकति सरकारकै बारेमा कुरा गरौं । नेकपाको सरकारप्रति जनतामा निराशा बढ्न थालेको छ, तपाईलाई कस्तो लाग्छ ?
कुनैबेला माओवादी आन्दोलनमा जनताको जुन अपेक्षा थियो, अहिले वर्तमान सरकारसँग ठ्याक्कै त्यस्तै अपेक्षा छ । माओवादी पूरै युद्ध नजिती, राज्यका संरचना नबदली र बहुमत पनि हासिल नगरी सरकारमा सहभागी भएको थियो । उसँग बहुमत पनि थिएन । त्यही कारण गठबन्धन भत्कियो । जनअपेक्षा र आफ्नै वाचा पूरा गर्न सकिएन ।
अहिले पनि एकतावद्ध नेकपा समूहसँग जनताको अपेक्षा छ, यो स्वाभाविक हो । यो अपेक्षा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र त्यसको सरकारले पूरा गर्छ । म आम जनतालाई यो विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।
तर, जति नै विश्वास दिलाउन खोजे पनि जनतामा आशा जाग्न सकिरहेको छैन…..
यसका केही स्टेपहरु छन् । अहिले देश संघीयताबाट अगाडि बढिरहेको छ । राजनीतिक पुनर्संरचनापछि निर्वाचन भए पनि प्रशासनिक पुनर्संरचना हुन बाँकी नै छ । मलाई लाग्छ- यसले अझै ५/७ महिना समय लिन्छ ।
मेरै कुरा गर्दा मैले यहाँबाट बजेट पठाएँ भने मेरो त्यहाँ काम गर्ने निकाय प्रदेश हो । तर, अझै प्रदेशले पूर्णरुपमा काम गरिसकेको छैन । यस्ता ग्यापहरु छन् । जनतालाई हामीले बुझाउन नसक्नु र विस्तारै काम सुरु गर्नमा केही न केही ग्याप छ ।
जस्तो- अहिले ‘प्लस टु’सम्मको शिक्षादेखि आधारभूत स्वास्थ्यसम्म स्थानीय तहलाई गएको छ । तर, सिंहदबारले नै दिनुपर्छ भन्ने जनताको अपेक्षा छ । तर, स्थानीय तह पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा गएको छैन ।
अर्को कुरा, जसरी राजनीतिक परिवर्तन भयो, त्यसलाई ‘क्यास’ गर्न सक्ने प्रशासनिक पुनसंरचनामा जानै पर्ने हुन्छ । कर्मचारी स्थायी सरकार हो । हामीलाई तीब्र गतिमा आर्थिक विकास चाहिएको छ । भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्दैै यसलाई पूरै शुन्य शहनशीलताको अवस्थामा पुर्‍याउनुपर्ने छ । पूरै सुधार गर्नु पर्नेछ । तर, भनेजस्तो ढंगले अझै जान सकेको छैन ।
स्वभाविकरुपमा सरकारप्रति अधिनायकवादी इत्यादि भनेर विपक्षीले खेद्ने कुरो पनि भई नै हाल्यो । काहीँ न काहीँ एकखालको अविश्वास पैदा त गरिहाल्छन् नि ।
तर, विपक्षी त कमजोरै छ नि होइन र ? विपक्षीलाई देखाएर उम्किने अवस्था छ र ?
राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय सबै विपक्षी भन्छौं नि हामी । काहीँ न काहीँ सबैको बीचबाट जाँदा अलिकति हामीले विभिन्न कारणले परफरमेन्स गर्न नसक्ने स्थिति आएको हो । यता हामी आफैंतिर फर्किँदा मुख्य नेतृत्व हामी आफ्नै कामहरुमा अल्मलिइरहेको छ पार्टी एकता लगायत आदि इत्यादिमा । यी सबै कारणहरु जनताले बुझिदिनुपर्छ ।
तर, एउटा कुरा के हो भने सबै कारणका बाबजुद हामी परफमेन्स गर्छौं । डेलिभरी दिन्छौं । हामीले प्रतिवद्धता दिएका कुराहरु पूरा गछौर्ं । अलिकति समय लाग्छ । विस्तारै कामहरु हुँदैछन् । हामी अर्को ६ महिनाभित्र देखिने गरी केही ठूला आयोजना शिलान्यास गर्छौं । केही देखिने गरी प्रशासनिक सुधार गर्छौं । तीनवटै तहका सरकारहरु देखिने गरी, पूर्णरुपमा काम गर्ने अवस्थामा पुग्छन् ।
सुरुको पालामा पनि प्रधानमन्त्रीको खुब विरोध भएको थियो । नाकाबन्दीको प्रतिवाद भएपछि विस्तारै स्थापित भएको थियो त्यतिबेला पनि । कहिलेकाहीँ काम गर्दै जाँदा यस्तो हुन्छ । जनताको आलोचना आउनुपर्छ । खबरदारी हुनुपर्छ । तर, असम्भवै भनेर निराश हुनुहुँदैन ।
तर, नेकपाले सरकार चलाउन सक्दैन र पश्चिम बंगालको कम्युनिष्ट सरकार जस्तै सेटब्याक खान्छ भन्नेखालका विश्लेषण पनि आउन थालिसके….
अहिले देशको सबै राजनीतिक, प्रशासनिक, बौद्धिक प्रतिभा नेकपामा केन्दि्रत भएको छ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा नेता मात्र होइन, सबै खालका विज्ञहरु यसैमा केन्दि्रत छन् । नेकपाले गरेन भने नेपालले केही दशकसम्म गर्न सक्दैन । यसमा चाहिँ अहिल्यै निष्कर्षमै पुगिहाले हुन्छ ।
तर, प्रश्न के हो भने हामीसँग क्षमता छ, प्रतिभा छ, हामीसँग राम्रा राम्रा पात्रहरु पनि छन्, तिनलाई केन्दि्रत गरेर परिचालित गर्नेमा हाम्रो अलिअति कमजोरी पनि भयो कि ?
जनताले प्रश्न उठाएको सही कुरो हो । तर, प्रश्न जनताले यो हदसम्म उठाएको लाग्दैन कि यो पार्टीले सक्दैन, यो नेतृत्वले सक्दैन । खबरदारी गर्नुसम्म ठीक छ ।
हामी कहिले राजा फाल्न हिँडयौं, कहिले एकात्मकताविरुद्ध लड्यौं । कहिले समावेशिता भनेर आन्दोलन चलायौं । हामी आन्दोलनबाट आएका हौं । र, अब विस्तारै यही पुस्ताले नै विकास र समृद्धिको नेतृत्व गर्नुपर्छ । कतिपय देशहरुमा एउटाले पुस्ताले राजनीतिक क्रान्ति गर्ने र अर्को पुस्ताले चाहिँ आर्थिक क्रान्ति गरेको छ ।
तर, हाम्रो राजनीतिक क्रान्ति गर्ने पुस्ताले नै आर्थिक क्रान्ति गर्दै फेरि नयाँ राजनीतिको ढोका खोल्ने भनेर हामी आएका छौं । हामीले आफूसँग भएका प्रतिभा, क्षमताहरुलाई समेटेर कोशिश गर्‍यौं भने अहिलेको नेतृत्वले गर्न सक्छ । गर्नु पनि पर्छ ।
तर, यसका लागि हाम्रो आचरण र व्यवहारमाथि बहस गर्नैपर्छ । हिजोकै आचरण, व्यवहारले चाहिँ हुँदैन ।
मन्त्रीको टीम फेर्ने चर्चा पनि सुनिन्छ नि ?
यो हतार हुन्छ हेर्नोस् । नयाँ मन्त्रीहरुलाई ६ महिना सिक्नै समय लाग्छ । अर्कोतर्फ ५ वर्षे प्लानिङ गरेर मन्त्रीहरुले काम गरिरहेका छन् । ५ महिना त नीतिगत सुधार र संगनात्मक संरचना बनाउँदैमा समय गएको छ । त्यसैले कमसेकम एउटा आर्थिक वर्ष त हेर्नुपर्छ ।
कसैले गम्भीरै गल्ती गर्‍यो भने त उसलाई प्रधानमन्त्रीले कारवाही नै पनि गर्नुपर्ने हुन सक्छ । नत्र, कम्तिमा एउटा आर्थिक वर्ष समग्र परफरमेन्स हेर्नुपर्छ ।
प्रधानमन्त्रीलाई जाँच्न कति वर्ष लाग्ला ? एक वर्ष कि पाँच वर्ष ?
प्रधानमन्त्रीलाई त ५ वर्षकै लागि भनेर म्यान्डेट दिइएको छ, त्यसैले ५ वर्ष लगाएरै जाँच्नुपरेन ? जनतासँग ५ वर्षमा काम गर्छौं भनेर म्यान्डेट लिने अनि ५ महिनामै तेरो परीक्षा लिन्छु भन्न त भएन नि । ठीक छ, अर्धवाषिर्क परीक्षा लिए हुन्छ, तर फाइनल परीक्षामा भाग लिने अवसर दिनुपर्छ ।
तर, अहिले कलेजहरुमा त सेमेष्टर सिस्टम आइसक्यो….
सेमेष्टर सिस्टम गरे पनि हुन्छ । ४/४ महिनामा सेमेष्टर जाँच लिएर उसको नम्बर हेर्दै लास्टमा निर्णय लिए हुन्छ ।
यसरी हेर्दा हाम्रो फस्ट सेमेष्टर सिद्धिएको छ । यसअवधिमा हामी नीतिगत तयारीमै लाग्यौं । योजना र कार्यक्रम बनाउँदा यो सेमेष्टर बित्यो । अब अर्को सेमेष्टरमा अलि बढी परफरमेन्स देखिन्छ । फाइनल सेमेस्टरमा नतिजाहरु देखिन थाल्छन् ।
सरकारको विषयमा पनि कुरा गरियो, अब तपाईले हाँकेको मन्त्रालयका बारेमा छलफल गरौं । तपाई माओवादीमा हुँदाखेरि उदीयमान युवा नेताका रुपमा चिनिनुहुन्थ्यो । तर, अहिले उर्जामन्त्री भएपछि गुमनाम हुनुभयो नि ?
होइन । पार्टीमा मैले लो-प्रोफाइलमा काम गरेँ । सानो काम गरेर ठूलोठूलो प्रचार कहिल्यै गरिनँ । सकेसम्म महत्वपूर्ण, चुनौतिपूर्ण काम गर्ने तर, लो प्रोफाइलमा ।
मलाई के विश्वास छ भने मैले प्रधानमन्त्रीको भिजन, पार्टी अध्यक्षका योजना र घोषणापत्रमा अघि सारिएका कार्यक्रमहरुलाई पूरा गर्न नेपाली जनताको अपेक्षामा खरो उत्रिन सक्छु । केही प्रश्नहरु उठ्न सक्लान् । के गर्दैछ भनेर । तर, अन्तिममा मैले रिजल्ट दिनेछु ।
मैले अर्थ मन्त्रालयमा बस्दा पनि धेरै हल्ला गरेर हिँडेको छैन । म अर्थमन्त्री हुँदा गुरिल्ला अर्थमन्त्री भने धेरैले । तर, पछिचाहिँ अर्थशास्त्रको त्यति धेरै पृष्ठभूमि नभए पनि राम्रै चलाएँ । अहिले निकै प्रशंसा गर्छन् ।
उर्जा र सिचाइँमा आइसकेपछि यहाँ धेरै कुरा लथालिंग थिए । आर्थिक संक्रमणमा एकैजना सचिवले ४/५ जना मन्त्रीहरुसँग काम गरेका छन् । मन्त्री आएकै दिनदेखि कहिले जान्छ भनेर हिसाब सुरु हुन्थ्यो । अहिले मन्त्री आएको दिनदेखि यो काम गर्ने मन्त्री हो, यो काम गर्ने सरकार हो भन्ने सबैलाई थाहा छ ।
मैले उदाहरणमा के भनेको छु भने यो क्रिकेट खेल हो । तर, ट्वान्टीट्वान्टी खेल होइन । वान डे पनि होइन । यो टेस्ट सिरिज हो । ३ दिन ५ दिनसम्म खेलाडीहरु लगातार खेल्छन् ।
तर, मन्त्री बनेको यतिका महिना भइसक्दा पनि काम त खासै भएको देखिँदैन नि ?
मैले उदाहरणमा के भनेको छु भने यो क्रिकेट खेल हो । तर, ट्वान्टीट्वान्टी खेल होइन । वान डे पनि होइन । यो टेस्ट सिरिज हो । ३ दिन ५ दिनसम्म खेलाडीहरु लगातार खेल्छन् । खेलाडी ११ जनै हुन् । बल त्यही हो । नियम त्यही हो । तर, धेरै दिन टिकेर खेल्नुपर्छ । एकैपटक चौका र छक्का हान्छु भन्दा चाहिँ सुरुमै आउट हुन पनि सकिन्छ ।
त्यसैले विस्तारै विपक्षीको आलोचना र आक्रमणलाई फेल गर्दै पछि निस्किँदा त यो सरकार सिरिज जितिराखेको क्याप्टेन भइराखेको ! यस्तोचाहिँ भन्ने गरेको छु । त्यो सम्भव छ र हुन्छ ।
किनभने, क्रिकेट खेल भनेको हेर्नेलाई ट्वान्टी ट्वान्टी राम्रो । फटाफट आयो, चौका, छक्का हान्यो । तर, क्वालिटीको खेलाडी छुट्याउने चाहिँ सिरिज खेलमा हो । सिरिज पनि ३ दिने, ५ दिने हुन्छ ।
तपाईले यो ७/८ महिनामा कति रन हान्नुभयो त ? अहिलेसम्म केके काम भए ?
म सन्तुष्ट छु । नीतिगत सुधारका कुरा गर्दा विद्युत क्षेत्रको नियमन आयोग गठन गर्ने कानुनहरु बनेका छन् । त्यो अनुसार नियामावली बनेर आयोग गठन गर्ने काम अगाडि बढेको छ । नियामक निकाय, महसुल निर्धारण गर्ने, जेनेरेशनका कुरा, रेटका कुराहरु छन् । निजी क्षेत्रमा भटाभट लगानीहरु भइरहेका छन् । तर, जनताको लगानी कहाँ छ, अब त्यहाँ के हुन्छ थाहा छैन । त्यसैले नियमन गर्ने आयोग बनेको छ । हामीले यसलाई अगाडि बढाइसकेका छौं ।
नीतिगत सुधारमा हेर्दा विद्युत क्षेत्रमा नियमन आयोग गठन गर्ने कानुन मात्रै बनेको थियो, त्यो अनुसार नियमावली बनेर अहिले हामी आयोग गठनमा अगाडि गएका छौं । अहिले प्राइभेट सेक्टरबाट फटाफट लगानी भइराखेका छन् । तर, जनताको लगानी कहाँ छ भनेर नियमन गर्ने निकाय छैन ।
अर्को, राष्ट्रिय जलस्रोत नीतिका सबै काम पूरा गरेर अब हामी क्याबिनेटमा लैजाने अवस्थामा छौं । सबै सरोकारावालासँग छलफल गरेर आवश्यक सुझाव लिइसकेका छौं । सातै प्रदेशका सम्बन्धित मन्त्रीहरुसँग छलफल गरिसकेका छौं । स्थानीय तहहरुलाई पनि सुझावका लागि पठाएर आवश्यक सुझाव लिइसकेका छौं ।
अहिलेसम्म नेपालमा जलस्रोत नीति नै थिएन । अहिले हामीले राष्ट्रिय जलस्रोत नीति निर्माण गरेका छौं र अगाडि बढाएका छौं । यसले स्थानीय जल कसरी उपयोग गर्ने भन्ने स्पष्ट पार्छ । खानेपानी, सिंचाइ, जलविद्युतका साथै अरु मनोरञ्जन र वातावरण संरक्षणमा जलको उपयोग कसरी गर्ने ? प्रदेशले कसरी गर्ने ? संघले कसरी समन्वयात्मक काम गर्ने ? यसबारे हामीले जलस्रोत नीति बनाएका छौं ।
एकातिर हामीले प्राकृतिक श्रोतलाई समृद्धिका लागि प्रयोग गर्नुपर्छ भने अर्कोतिर, भोलिका लागि यसको दीगो पनि प्रयोग हुनुपर्छ । भोलिको पुस्ताका लागि पनि सोच्नुपर्‍यो । यसलाई ध्यान दिँदै हामीले उर्जा, जलश्रोत र सिंचाइ मन्त्रालयको रणनीति श्वेतपत्रमार्फत अगाडि सारेका छौं ।
हामी अबको १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्छौं । दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि गर्ने यो सरकारको रणनीति छ । यसका लागि हामीलाई ९ देखि १० हजार मेगावाट विद्युत चाहिन्छ । बाँकी ५ हजार मेगावाटका लागि हामी क्षेत्रीय मार्केट, बाहृय मार्केट खोज्छौं ।
आन्तरिकरुपले पनि खपत बढाउँछौं । यसरी हामी आगामी ५/१० वर्षमा कम्तिमा पनि ५ हजार मेगावाट बिजुली बेच्ने ठाउँमा पुग्छौं । तीन वर्षमा पाँच हजार विद्युत निकाल्ने गरी योजनामा बनिराखेको छ । अहिले ४ हजार मेगावाट निमार्णको चरणमा गइसकेको छ ।
मानिसहरुले भन्छन्, विद्युतमा लगानी त गर्ने तर, अरबौं अरब लगानी सुनिश्चित गर्नुपर्ने छ । देशभित्र कति खपत हुन्छ, त्यसको बजार बनाउनुपर्‍यो । बाँकी के गर्ने त भन्दा हामीले भारतसँग विद्युत व्यापार सम्झौत्ाा गरेका छौं । चीनसँग हामीले सम्झौता गरेका छौं । अहिले हामीले बंगलादेशसँग पनि सम्झौता गरेका छौं । बिमस्टेक देशहरुमा प्रसारण लाइन जोड्ने र विद्युत बिक्री गर्ने सञ्जालका लागि एमओयु गरिसकिएको छ ।
नेपालमा विद्युत आयोजना निर्माणका लागि युरोपियन, इन्डियन, चाइनिज, अमेरिकन, कोरियन, जापानी, बंगलादेशी आदि लगानीकर्ताहरुसँग विभिन्न सन्दर्भमा अन्तरक्रिया भएका छन् ।हामीले लगानीमैत्री वातावरण बनाउने र लगानी आकर्षण गर्ने भनेका छौं । भर्खरै बेइजिङमा एउटा ठूलो विद्युत सेक्टरसँग लगानी सम्मेलन गर्‍यौं ।
समृद्धि भनेको सामान्य न्यायसहितको हुनुपर्छ । हाम्रो प्राकृतिक स्रोत भनेको पानी हो । पानीबाट समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ । समृद्धिको हिस्सा आम जनताको पनि हुन्छ । पौने तीन करोड नेपाली जनता प्रत्येकको घरमा विद्युतको सेयर पुग्नुपर्छ । हामीले ‘जनताको जलविद्युत आयोजना’ भनेर १९ वटा आयोजनालाई छानेका छौं । असाध्यै आर्कषक । त्यो ३५ सय मेगावाट जति हुन्छ ।
त्यस्ता आयोजनामा जनताको लगानी । हुन्छ अहिले हामी त्यसका सबै कानुनी, प्रावधिक पक्षहरु मिलाएर अगाडि बढिराखेका छौं । छिट्टै हामीले त्यस्ता आयोजना उद्घाटन गर्ने, र सुरु नै गर्ने गरि तयारी गरेका छौं । यसले हरेक घरमा विद्युतको सेयर पुग्छ र उनीहरुले लाभ पाउँछन् ।
हामीले केही आयोजनाहरु छनोट गरिसकेका छौं । नीतिगत व्यवस्था गर्दैछौं । धितोपत्र बोर्डसँग केही नितिगत सुधारहरु गर्ने कुरो भएको छ । अर्थ मन्त्रालयसँग सल्लाह गरेका छौं । यी सबै तयारी पूरा गर्दैछौं । यो पूरा हुनेवित्तिकै हामी आयोजना लञ्च गर्छौं । सार्वजनिक उद्घाटन गर्ने, आयोजना सुरु गर्ने र जनतामा अपील गर्ने ।
त्यसपछि हामीले ट्रान्समिन लाइनको पूरै राष्ट्रिय रोडम्याप पनि गुरु योजना नै पेस गरेका छौं । गुरुयोजना बनाएर सार्वजनिक गरिसकेका छौं । भनसुनका आधारमा प्रभाव पार्न भएन । हाम्रो राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा हामीसँग आफ्नै नेटवर्क हुन्छ । विद्युत विस्तारका लागि यो एउटा हाइवे बनाउने योजना पेस गरेका छौं । त्यो अनुसार अगाडि बढाउने काम गरिरहेका छौं ।
हामी आगामी तीन वर्षभित्र सबै नेपाली जनतालाई विद्युतको सुविधा पुर्‍याउँछौं । हामी गीड अर्थात प्रसारण लाइन पुग्ने ठाउँमा प्रसारण लाइनबाट, त्यो नपुग्ने ठाउँहरुमा अफग्रिट सोलार लगायतका प्रविधि प्रयोग गर्नेछौं । घरघरमा प्लेट राखेर होइन कि गाउँहरुमा अलि ठूलो स्त्रिmनका सोलार प्यानलहरु फार्मिङ गर्ने । त्यसबाट उज्यालो पनि हुन्छ । केही साना उद्योग पनि चल्छन् । यसरी तीन वर्षभित्र हामी सबैका घरमा उज्यालो पुर्‍याउँछौं ।
अर्कोतिर काठमाडौं उपत्यकामा साढे ६ सय किलोमिटर अण्डरग्राउन्ड केबुलिङ गर्दैछौं, जसले यो शहरको सुन्दरतै अर्को हुन्छ । यसमा पहिलो टेण्डर रद्द गर्‍यौं । त्यो मिलेन र दोस्रो टेण्डरमा गएका छौं । हामी अब काठमाडौं सुन्दर बनाउँछौं । अब तार झुण्डिनेखालको हुँदैन । त्यतातिर हामी अगाडि बढिसकेका छौं ।
त्यस्तै हामीले बिजुलीको स्मार्ट मिटर प्रयोग गर्दैछौं । मोमाइलबाटै आफैं प्रिपेड चार्ज गरेर प्रयोग गर्न मिल्ने बनाउँदैछौं । यसको टेण्डर नै गरिसकेका छौं । यस्ता सुविधाहरुतिर हाम्रो ध्यान गएको छ ।
त्यसैगरी महत्वपूर्ण आयोजनाहरु, जस्तो कुलेखानी, त्यसलाई पूरा गर्नका लागि सम्बन्धित ठेकेदारलाई काम लगाउने र हाम्रो जनशक्ति प्रयोग गर्ने भइराख्या छ । त्रिशुली थ्री बीले समय मागिराखेको छ । त्यसलाई एकदम ताकेता गरिराखेका छौं । अपर तामाकोशी समयभन्दा अलिकति ढिलो भइसकेको छ । त्यसमा कुनै हालतमा विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्वलाई आयोजना पूरा गर्न मैले बारम्बार जवाफ मागिरहेको छु । आयोजनाहरुलाई दुहुनो गाई बनाउनुहुन्न, यसमा जनताको लगानी छ भनेर मैले बारम्बार भनेको छु ।
म अस्ति सोलु कोरिडोर गएँ । त्यहाँ आयोजना आइहाल्ने प्राइभेट सेक्टरबाट । तर, ट्रान्समिसन नबन्ने । यसमा जिम्मेवार बन्नुपर्छ । आयोजना प्रमुख को हो ? प्राधिकरणको नेतृत्व पनि यसमा जिम्मेवार बन्नुपर्छ र सबै शक्ति लगाएर त्यसलाई पूरा गर्नुपर्छ ।
काबेली कोरिडोरमा हामीले अलि धेरै नै स्पिटअप गरेका छौं । केही चासोहरु थिए । ती मिलाएर कामहरु अगाडि बढेका छन् । यस्तै विभिन्न सबस्टेशनहरु, ट्रान्समिसन लाइनहरुलाई हाम्रो रणनीतिक महत्वका साथ पूरा गरिराखेका छौं ।
त्यसैगरी, हाम्रो विद्युत प्राधिकरणले किन्ने बिजुलीमा ‘टेक अर पे’ को खुब हल्ला छ । यसमा म मन्त्री भइसकेपछि भनेको छु, उत्पादित विद्युतको म मार्केट खोज्छु । कतिपय सुन्न आउँछ, केहीले लेखेका पनि छन् । सबै आयोजनको विद्युत खरीद गर्दा प्राधिकरणले घाटा खान्छ । मै अर्थमन्त्री हुँदा प्राधिकरण ऋणमा डुबेको थियो, त्यसलाई मिनाहा गर्दियो सरकारले । महराजी अर्थमन्त्री हुँदा ८/१० अर्ब भन्दा बढी गर्दिनुभो ।
अहिले २८/३० अर्ब भएको छ । प्राधिकरणलाई समस्या हुँदा सरकारले हेरेको छ । यो सरकारको कम्पनी हो । मैले बाहिर प्राधिकरणका केही साथीहरुले बोलेको सुनें । मैले तपाईंले गैरजिम्मेवार रुपले नबोल्नुस भनेको छु । अहिलेसम्म सरकारले हेरेको छ । फेरि पनि सरकारले हेर्छ । म मन्त्री हुँ । म विद्युतको बजार बनाउँछु । १५ हजार मेगाबाट हुन्छ । १० हजार मेगावाट देशभित्र खपत गरौं, ५ हजार बाहिर बेचौं । यसको जिम्मा मेरो भयो ।
उत्पादित बिजुली कसरी बेच्ने भनेर चिन्ता गर्नुपर्दैन त ?
पर्दैन । कोही प्राइभेट सेक्टरका लगानीकर्ताहरु डराइराख्नुभएको भने डराउनु पर्दैन । मैले बोर्डलाई निर्देशन दिइसकेको छु । बोर्डले छिट्टै टुङ्ग्याउँछन् । अहिलेसम्म जति सम्झौता भएका छन् । सबै लिने र बजार बनाउने हाम्रो जिम्मा हो । विद्युत आयोजना निर्माण गर भन्ने अनि हामी किन्दैनौं भन्न कहाँ पाइन्छ ?
देशमा विद्युको खपत बढाउनुपर्छ । हामी विद्युतीय गाडीहरुको प्रयोग गर्दैछौं । इन्डक्सन चुल्होहरुको प्रयोग बढाउँदैछौं । उद्योगहरुको विकास गर्छौं र हामी विद्युतको खपत बढाउँछौं । अहिले पनि विद्याुतको माग बढिरहेको छ । मन्त्रीकहाँ निवेदन लिएर कोही १० मेघावाट, कोही २० मेगावाट विद्युत मागिरहेका छन् । हामीले बिजुली दिन सकिराखेका छैनौं । अनि यस्तोबेलामा हामीले विद्युत किन्दैनौं भनेर लगानीकर्तालाई तर्साउने ? हामीले उनीहरुको लगानी सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
त्यसैले हामी विद्युत खरिद गर्ने ग्यारेन्टी दिन्छौं । किनभने विद्युत किन्ने एउटै संस्था प्राधिकरण छ, त्यसले किन्नैपर्छ । हामी किन्छौं र किनेको विद्युतको उपयोग गर्छौं ।
तपाईको जिम्मेवारी त ऊर्जासँगै सिँचाई मन्त्रालय पनि होइन ?
सिँचाईतर्फ हामी एउटा मात्र होइन, बहुउदेश्य आयोजना सञ्चालन गर्ने योजनामा छौं । त्यहाँबाट विद्युत पनि आवोस्, सिंचाइ पनि होस् र खानेपानी पनि होस् ।
नेपालमा पानीजहाजको सबैभन्दा धेरै सम्भावना नारायणीमा देखिन्छ भने दोस्रो सम्भावना कोशीमा देखिन्छ । र, तेस्रो सम्भावना कर्णालीमा । तीनवटै नदीहरुमा जल यातायातका लागि तयारी भइरहेको छ ।
तमोर-चिसाङ डाइभर्सन, सुनकोशी-मरिन डाइभर्सन, कालीगण्डकी- तिनाउ डाइभर्सन, नौमुरे-कपिलवस्तु डाइभर्सन, माडी-दाङ डाइभर्सन आदि बहुउद्देश्यीय आयोजनाहरु हामीले लिइराखेका छौं । यसले गर्दा खेतबारीमा सिंचाइ क्षेत्र वृद्धि हुन्छ । उत्पादन वृद्धि हुन्छ ।
कृषिमा क्रान्ति हुन्छ । साथै हामीले उर्जा पनि प्राप्त गर्न सक्छौं । यस्तो बहुउद्देश्यीय काम गर्दा लागत एकदमै सस्तो पर्छ । त्यसैले हामीले यस्ता आयोजनाहरु अगाडि बढाइराखेका छौं ।
प्रधानमन्त्रीले भनेको पानीजहाजचाहिँ कसको मन्त्रालयमा पर्छ ?
पानीजहाज पनि हामीले नै हेरिराखेका छौं । हाम्रो मन्त्रालयका एकजना सहसचिवको नेतृत्वमा कमिटी बनेको छ । भारतीय पक्षसँग औपचारिक मिटिङ भइसकेको छ । हाम्रो टीमले भारतको जल यातायातको अध्ययन गरेर आएको छ । त्यसैगरी एउटा टीमले बंगलादेशको जल यातायात पनि हेरेर आइसकेको छ ।
यही नोभेम्बर महिनामा छत्तीसगढको साहेबगञ्जमा मल्टी मोडेल टर्मिनल उदघाटन हुँदैछ । त्यहाँसम्म बंगालको खाडीबाट २५ सय टनको पानीजहाज आउँछ । त्यो बिराटनगरदेखि डेढसय किलोमिटरमात्रै टाढा छ ।
त्यसैगरी पटनाको कालुघाटमा अर्कोवर्ष इन्टरनेशनल टर्मिनल भवन उदघाटन हुँदैछ । त्यहाँदेखि हाम्रो वीरगञ्ज १८० किलोमिटर दूरीमा पर्छ ।
यसमा, हाम्रो जुन व्यापार तथा पारवहन सम्झौता छ, त्यसलाई संशोधनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ, जसबाट हाम्रो नजिकको कालुघाट र साहेबगञ्जको प्रयोग गर्न सकियोस् । पानीको बहाव व्यवस्थापन गर्नेवित्तिकै त्यहाँबाट २ सयदेखि ३ सय टन क्षमताका पानीजहाज नेपाल आउन सक्छन् ।
तर, हामीले तमोर-चिसाङ डाइभर्सन, कमला- मरिन डाइभर्सन, भेरी बबई डाइभर्सन इत्यादिको कुरा गरिरहेका छौं । यसरी नदीको पानी डाइभर्सन गरेपछि पानीजहाज कसरी चल्ला ?
यसमा समस्या छैन । हामीले तमोरको आयोजना जलाशययुक्त बनाउँछौं, जसबाट हिउँदमा रेगुलेटेड पानी पठाउँछौं । वर्षायाममा हामीलाई समस्यै छैन । दूधकोशीबाट पर्याप्त पानी हिउँदमा जान्छ । त्यसैगरी बुढीगण्डकीको जलाशयबाट नारायणीमा बाह्रैमास पानी जान्छ र जल यातायात चल्छ ।
तपाईमाथि हुने एउटा आलोचना के हो भने बूढीगण्डकीमा साह्रै अपरिपक्व निर्णय भयो । कहिले आफैं बनाउँछु भन्ने र पेट्रोलमा करसमेत लगाउने, कहिले चाइनिज कम्पनीलाई दिन्छु भन्ने, कहिले दिन्न भन्ने, अहिले फेरि उसैलाई दिन्छु भन्ने । यस्तो किन भएको ?
यसमा मैले धेरै भन्नु छैन । यसमाथि धेरै नै बहस, छलफल भइसकेको छ । अहिले हामीले नयाँ ढंगले जाने फेरि निर्णय गरेका छौं । अब सबैले हेर्ने के हो भने यो कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन ? एक लेभलका विज्ञहरुलाई थाहा छ कि यस्ता ठूला आयोजनाहरु हाम्रो स्रोतले मात्रै बनाउन पुग्दैन । यो भन्दा राम्रा आयोजनाहरु पनि छन्, जो हाम्रो स्रोतबाटै बनाउन गइरहेका छौं ।
हामीले झण्डै ३५०० मेघावाट झण्डै ६ खर्बमा जनताको जलविद्युत योजना अगाडि सारेका छौं । निजी क्षेत्रले पनि अर्बौं खर्च गरिराखेको छ । यस्ता ठूला जलाशययुक्त आयोजनाहरु फेरि पनि सरकारकै आयोजना हुन् । ऋण सरकारकै हो । बनाउने मोडालिटीमात्रै असल फरक भएको हो ।
यसमा मेरो प्रतिवद्धता के हो भने जनताले बुढी गण्डकी कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भनेर हेरिराखेका छन् । पश्चिम सेतीजस्तै होल्ड हुन्छ कि ? म होल्ड हुन दिन्न । लागत उच्च हुन्छ कि भन्ने छ, म लागत बढ्न दिने छैन । पारदर्शिताका बारेमा कुरा गर्दा डीपीआरै छ, यति लागत लाग्छ भन्ने स्पष्ट छ । हामी बसेर लागत निर्धारण गर्छौं ।
त्यसैगरी ऋणको धरापमा परिन्छ कि भन्ने छ, म त्यस्तो हुन दिनेछैन । म यस मन्त्रालयको जिम्मेवार मन्त्री भएको हुनाले मैले ब्याज बढी लगाउने, ऋणमा बढी फस्ने गरी आयोजना कार्यान्वयन हुन अवस्था आउन दिनेछैन । आम जनतासँग मेरो के आग्रह छ भने विगतमा जेजस्तो अपन-डाउन भए पनि एकपटक यसलाई कार्यान्वयनमा गएर हेरिदिनोस् । यसमा बेठीक भयो भने प्रश्न गरिदिनोस् ।
र, यस्तै अरु ठूला आयोजनाहरु चीनमात्रै होइन, भारत, अमेरिका, युरोप, जापान, जहाँका लगानीकर्ताहरु आए भने पनि हामी दिन तयार छौं । यसमा सरकारको नीति यसलाई दिने, उसलाई नदिने भन्ने छैन ।
तर, सरकारले त्यसरी दिने भन्दा पनि प्रतिस्पर्धा गराएर कर्पोरेट मोडलमा यस्ता आयोजनाहरु बनाउनुपर्छ भन्ने तर्क पनि छ नि ?
बूढीगण्डकीलाई कर्पोरेट मोडलमा बनाए के हुन्छ ?
यसमा २००६ मा हामीले प्रतिस्पर्धा गराएकै हो । माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रो र बूढीगण्डकीमा कोही आएनन् । पछि २००८ मा बूढीगण्डकीमा मात्रै टेण्डर गर्दा पनि कोही आएन । अहिले यो कम्पनीले म गर्छु भनेको हुनाले ऊसँग सम्झौता भयो । तर, यस्ता ठूला आयोजनाहरुमा ठूलो रिस्क हुने हुनाले सामान्यतयाः १०/२० मेघावाटको जस्तो सजिलो हुँदैन ।
उसोभए प्रतिस्पर्धाका लागि प्रयास गर्दा पनि नभएपछि यो मोडलमा जानुपरेको हो त ?
दुई दुईपटक प्रतिस्पर्धा गराउँदा पनि कोही आएन । तर, हामीलाई यस्ता जलाशययुक्त आयोजनाहरु जरुरी छन् । आगामी वर्ष ४५६ मेघावाटको अपर तामाकोशी हामी ल्याउँछौं । त्यससँगै वर्षायाममा हाम्रो विद्युत बचत हुन्छ । यी ठूला आयोजनाहरु बन्नेवित्तिकै हिउँदमा पनि हामी आत्मनिर्भर अवस्थामा पुग्छौं । त्यसैले हाम्रो मुख्य जोड विद्युतमा आत्मनिर्भर बन्ने र त्यसपछि विस्तारै विद्युत निर्यात गर्ने हो ।
तपाई आफ्नो मन्त्रालयको काममा त सन्तुष्टै हुनुहुँदोरहेछ । तर, समग्र सरकारको भूमिकामा सन्तुष्ट हुने ठाउँ कहाँनेर छ ?
सरकारको कुरा गर्दा कोही नयाँ साथीहरु हुनुहुन्छ । पहिलोपल्ट मन्त्री हुनुभएको छ । उहाँहरुलाई सिक्नै केही समय लाग्छ । कोही साथीहरु पुराना हुनुहुन्छ, उहाँहरुले अलिअलि गति लिनुभएको छ । विभिन्न समस्याहरु छन् । तर, बिस्तारै टीम बन्दैछ ।
सरकार बनाउँदा दुईवटा पार्टीका भएर गठबन्धन बनायौं । अहिले एउटै पार्टीका भएका छौं । तर, अझै एउटै पार्टीका नेता कार्यकर्ताका रुपमा काम गर्नका लागि अझै टाइम लिन्छ ।
सरकार भनेको सामुहिक जिम्मेवारीजस्तो भए पनि मन्त्रीहरुको व्यक्तिगत दायित्व पनि हुन्छ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले सार्नुभएको, सरकारले सारेका नीति कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने छ । सुशासन, विकास र समृद्धि, जसबाट समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको लक्ष्यमा हामी पुग्छौं भनेर पार्टीले योजना अघि सारेको छ । प्रधानमन्त्रीको यही भिजन छ । यसमा आ-आफ्नो मन्त्रालयबाट काम गर्नुपर्छ ।
एउटा स्टेज शो गर्दा कसैले एउटा, कसैले अर्को काम गर्छ र सबैलाई मिलाउँदा एउटा राम्रो परफरमेन्स बन्छ । यसरी सबै स्टेज कभर गरेर आ-आफ्नो भूमिका पूरा गर्नुपर्छ ।
यसमा हामी आफैंले रामै्र गरेको जस्तो लाग्छ, तर दर्शकहरु छन्, उनीहरुले मूल्यांकन गर्छन् । यसमा नयाँलाई अनुभवको अभाव होला, पुरानाको हकमा मिस्टेक गरेका हुन् वा के हो भनेर सच्याएर जानुपर्ने हुन्छ ।
नेपालको पानीमा विदेशी चलखेलचाहिँ कत्तिको हुँदोरहेछ ? जलस्रोत र उर्जा मन्त्री भएपछि यसको केही अनुभूति भयो ?
यसमा स्वाभाविकै हो कि पानी भनेको नेपालको सबैभन्दा बढी उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत हो । विश्वमा यस्ता प्राकृतिक स्रोत साधनहरुको दोहन गर्ने र त्यसैको खोजीमा लडाइँहरु भएका छन् । पछि त्यसलाई तयारी माल बनाइसकेपछि बजार खोज्ने क्रममा पनि लडाइँहरु भएका छन् ।
त्यसकारण हामीले हाम्रो प्राकृतिक स्रोत साधनको कसरी अधिकतम प्रयोग गर्ने र कसरी भोलिको पुस्तालाई हुने गरी दीगो रुपमा संरक्षण गर्ने ? यी दुईवटा चुनौती हाम्रा सामु छन् । यस्ता ठुल्ठूला प्राकृतिक स्रोतहरुको लडाइँमा राष्ट्रियता र स्वाधीनता धरापमा पर्ने, जोखिममा पर्ने गरेका छन् । त्यसैले यसमा स्वाभाविकरुपले अन्तरराष्ट्रिय चासोहरु छन् ।
दोस्रो कुरा, हाम्रो आफ्नैखालको भूराजनीतिक अवस्था छ । हाम्रो वातावरणीय परिवर्तनको असर साझा रुपमा पर्छ । जलवायु परिवर्तन हुँदा सिंगै यो क्षेत्रलाई असर गर्छ । बाढी आउँछ, समग्र यो क्षेत्रलाई असर गर्छ । हामीले यहाँको पानीको प्रयोग गर्छौं, यो क्षेत्रभरि केही न केही चासो आइहाल्छ ।
स्वाभाविक रुपले कति हामीलाई फाइदा हुन्छ, कति तल्लो तटमा रहेका देशलाई फाइदा हुन्छ । यसमा हामीले हाम्रो प्राकृतिक स्रोतलाई हाम्रो राष्ट्रिय हितमा प्रयोग गर्ने र भावी पुस्तालाई संरक्षण गर्ने क्रममा हामी सचेत छौं । यसमा अनावश्यक बहस र विवादमा पर्ने भन्दा पनि हामीले आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । कसैको समर्थन वा विरोध भन्दा पनि हामीले हाम्रो देश र जनताको हितलाई प्राथमिकतामा राख्छौं ।
admin0895 २ वर्ष अगाडि अन्तर्वार्ता
२ वर्ष अगाडि
कनम्याक २०१८ : विपिन साँधी भन्छन् ‘जेसिबीको मुख्य लक्ष्य...
‘सिके राउतसँग वार्ता गर्दैनौं, विप्लव हाम्रै हुन्’
‘दुई तिहाईको सरकार डामेर छाडेको साँढे होइन’रातोपाटी संवाददाता
बाल बिकास माबिको अभिभावक भेला
ठग ठेकेदार अख्तियारको निगरानीमा, शौचालय मासेर वडा कार्यालय...
तरकारी मासेर घरबारी, गाउँमा बसाइँ सरे ३० हजार !
राष्ट्रपतिलाई विलासी गाडी चाहियो, खरिदका लागि १८ करोड निकासा
स्वरोजगार कोषमा सहकारीको रजाइँ, सहुलियतमा ऋण लिएर विपन्नसँग...
विदेशी पेन्सन खानेलाई पनि वृद्धभत्ता, प्रहरी एकेडेमी हटाएर...
छापामा आजः सरकारसँगै छैन २२ अर्बको वाइड बडी खरिद प्रमाण
छापामा आजः १० किलो चामल किन्न वडा र गाउँपालिका अध्यक्षको...
आजका पत्रपत्रिकाः चिनियाँ कम्पनीलाई भारतले बेच्यो नेपालको...
नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सूचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई समेट्छ।
घोराही दाङ, नेपाल
फोन नम्बरः ९८५७८६२३७३
दर्ता नम्बरः ५७८-१६५-४८७
© २०१८- २०१९ Joshilopost.com सर्वाधिकार सुरक्षित Regd No: ५७८-१६५-४८७